Somaliland: “Lacagta Lagu Fulinayo Bixinta Kaadhadhka Oo Markii Deeq-bixiyeyaashu Diideen, Madaxweynuhu Ballan-qaaday Weli Sanduuqayaga Waxba Kuma Jiraan..” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Lacagta Lagu Fulinayo Bixinta Kaadhadhka Oo Markii Deeq-bixiyeyaashu Diideen, Madaxweynuhu...
Somaliland: “Lacagta Lagu Fulinayo Bixinta Kaadhadhka Oo Markii Deeq-bixiyeyaashu Diideen, Madaxweynuhu Ballan-qaaday Weli Sanduuqayaga Waxba Kuma Jiraan..”
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Oo Xukuumadda Ugu Baaqay Dhammaystirka Kharashka Laga Sugayo
“Xukuumaddaydu waxay dabooshay ama dabooli doontaa in ku dhow %90 kharashyada diiwaangelinta Cod-bixiyeyaasha iyo doorashada Madaxtooyada ee qabsoomi doonta November 2017…” Madaxweyne Siilaanyo
Guddiga doorashooyinka Somaliland, ayaa sheegay inaanay Xukuumaddu wali bixin kala-badh iyo dheeraad Kharashaadkii kaga hagaagay fulinta diiwaan-gelinta Codbixiyeyaasha doorashooyinka, Kharashaadkaas oo isugu jira qayb dawladda laga doonayey iyo in lagu fuliyo hawl-galka qaybinta Kaadhadhka Codbixiyeyaasha, balse sababo farsamo markii laysku raacin kari waayey diiwaan-gelinta iyo bixinta kaadhadhka uu Madaxweyne Siilaanyo ballan-qaaday inay dawladdu bixinayso Dhaqaalaha qaybinta Kaadhadhka.
Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo shalay ka hadlay Munaasibad Guddigu ku soo bandhigeen natiijo hor-dhac ah oo ku saabsan tirada Codbixiyeyaasha iska diiwaan-geliyey gobollada iyo degmooyinka dalka sannadkii hore, ayaa sheegay inaan ballan-qaadkii Madaxweynaha ee bixinta Kharashka lagu fulinayo bixinta Kaadhadhka Codbixiyeyaashu aanu wali fulin, waxaanu dalbaday in sida ugu dhakhsaha badan Madaxtooyadu u bixiso Lacagtaas; si hawshaa loo dhaqaajiyo.
“Lacagta lagu fulinayo bixinta Kaadhadhka oo ay Deeq-bixiyeyaashu diideen inay bixiyaan, iyadoo markii hore ay isa saarnaayeen diiwaan-gelinta iyo bixinta kaadhku, balse uu Madaxweynuhu ballan-qaaday bishii September 2016-kii, Lacagtaas oo noqonaysa Afar Milyan oo dhadhaw, ballan-qaad baannu haynaa iyadana, laakiinse wali Sanduuqayada waxba kuma jiraan.” Sidaa ayuu yidhi Cabdiqaadir Iimaan.
Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Cabdiqaadir Imaan Warsame, waxa kale oo uu sheegay inay wali Xukuumadda baaqi ku tahay Hal Milyan oo Doollar oo ka mid ah qoondadii dawladdu bixinaysay Lacagta lagu qabtay diiwaan-gelinta Cod-bixiyeyaasha sannadkii hore, taas oo dhammayd afar Milyan oo Doollar (4Milion dolar), waxaanu xusay inay lacagtaas Xukuumaddu bixisay saddex Milyan oo qudha, waxaanu yidhi; “Shaqadan aannu immika gacanta ku hayno Dawladda Somaliland waxay bixinaysay Afar Milyan oo Doollar (4milion dolar), Afartaas Milyan waxaannu dawladda ka haynaa saddex Milyan, halkii Milyan ee kalena waa lagu leeyahay.”
Gebogabadii, Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Somaliland waxa uu ugu baaqay dhamaan dhinacyada ay khusayso qabsoomidda doorashadu inay dhammaystiraan howlaha kaga aaddan ee laga sugayo, waxaanu yidhi; “Guddiga doorashadu wuxuu ka codsanayaa dhammaan dhinacyada ay khusayso inay si deg-deg ah u soo dhammaystiraan, waxa kaga aaddan doorashada, hadday tahay Xisbiyada, hadday tahay Dawladda iyo hadday tahay Cid kale oo la xidhiidha oo ay wax kaga xidhan yihiin doorashada.”
Hadalkan ka soo yeedhay Guddoomiyaha Guddiga doorashada Somaliland, waxa uu weji-gabax ku yahay Madaxweyne Siilaanyo iyo Xukuumaddiisa, waxaanu Madaxweynuhu saddex maalmood ka hor sheegay inay Xukuumaddiisu bixisay, bixinna doonto kharashaadka ku baxaya hawlaha doorashooyinka boqolkiiba Sagaashan (90%), isagoo arrintaas ku tilmaamay mid muujinaysa sida ay Xukuumaddiisu daacadda uga tahay inay doorashooyinku u dhacaan sidii loogu talo-galay. Sidaa waxa uu Madaxweyne Siilaanyo ku sheegay Khudbad dheer oo uu ka jeediyey munaasibad lagu furay Mashruuca Sahaminta Shidaalka Somaliland oo Burco lagu qabtay Axaddii toddobaadkan.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu ka garaabay niyad-jebka ku yimi Qaadhaan-bixiyeyaasha Somaliland doorashooyinka ka taageeri jiray, inkasta oo uu hoosta ka xarriiqay in mashruucan iyo maamulkiisu yahay mid Somaliland u yaalla oo aan beesha caalamka khusayn, waxaanu yidhi; “Dhinaca kale, waxaan ka garaabaya niyad jabka ay ku keentay dib-u- dhicii doorashadeennu, dalalkii aynu saaxiibka ahayn, ee inaga caawin jiray geedi socodka, dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka….. Sidaa darteed, ma’aha mashruucani mid ay leedahay beesha caalamku, balse waa mid aynu leenahay manfiiciisa iyo masuuliyadiisa intaba.”
“Geeddi-socodka dimuquraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka xorta ah, ma jirto cid innagu qasabtay, isla markaana innagu san-dullaysay, balse, innaga ayaa ummad ahaan dan iyo maslaxad bidnay ama u aragnay.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweynuhu, waxaanu sheegay inay ka go’an tahay in doorashada Madaxtooyadu qabsoonto 13-ka bisha 11-aad ee 2017-ka.
“Si aan u meel mariyo, ama u xaqiijiyo doorasho xor iyo xalaal ah, oo dalkan ka dhacda, waxay xukuumadaydu isa saartay masuuliyad iyo culays dhaqaale oo aanay hore Dawladda Somaliland fuuli jirin. Marka la is barbar-dhigo, nidaamkii saami qaybsiga kharashka doorashooyinka Somaliland, %75 waxaa bixin jiray dalalka Deeq-bixiyeyaasha, halka Dawladda Somaliland ay ka bixin jirtay %25.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweyne Siilaanyo.
Waxaanu Madaxweynaha oo ka sii hadlaya arrinta doorashooyinka iyo kaadhadhka cod-bixiyeyaasha intaas ku ladhay oo uu yidhi; “Saamiga isbarbar-dhigga kharashka diiwaangelinta Cod-bixiyeyaasha iyo doorashooyinka Madaxtooyada ee innagu soo socota, waa mid si weyn uga duwan qorshayaashii hore ama saami-qaybsiyadii hore. Xukuumaddaydu waxay dabooshay ama dabooli doontaa in ku dhow %90 kharashyada diiwaangelinta Cod-bixiyeyaasha iyo doorashada Madaxtooyada ee qabsoomi doonta November 2017. Taasi waxay daliil cad u tahay, sida aannu daacad ugu nahay, isla markaana ugu diyaar-garownay, gudashada xil-wadareedkaa dusha naga saaran.”
Inkasta oo ay caddahay inaanay Xukuumadda talada haysaa u gudan ama uga soo bixin Kharashka ay Masuuliyaddiisa qaadday ee kaga aaddanaa qabashadii diiwaangelinta, kharashka qaybinta Kaadhadhka ee Madaxweynuhu ballan-qaaday iyo weliba kharashka kaga soo hagaagaya doorashada Madaxtooyada, sida uu Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinku-ba caddeeyey. Haddana waxa uu Madaxweynuhu u soo jeediyey Guddiga doorashooyinka inay si masuuliyad, dedaal, daacadnimo iyo hagar la’aan ah u gutaan waajibaadka Qaran ee saaran oo aanay mar dambe iman wax dib u dhigi kara doorashooyinka xidhiidhka ah ee Madaxtooyada, Golayaasha Deegaanka, Wakiillada iyo Guurtida ee mid walba Golaha Guurtidu horraantii bishan muddo-kordhinta u sameeyey.